Hupfumi hweMusika: Chii icho, zvakanakira nekuipira uye muenzaniso | Ehupfumi Zvemari
Claudi Casals | 29/06/2021 16:00 | General hupfumi
Iwe pamwe watove wakanzwa nezve musika kana yemahara yemusika hupfumi. Kunyangwe hazvo vanhu vazhinji vachingozvibatanidza nehupfumi, vashoma kwazvo vanonyatsonzwisisa zvarinoreva. Chii chaizvo chiri musika hupfumi? Chinoshanda sei? Sisitimu ino inorevei?
Chinangwa chechinyorwa chino ndechekujekesa kusahadzika uku kwese kwakabatana nehupfumi hwemusika. Tichatsanangura kuti chii, zvakanakira nekuipira uye muenzaniso wekunzwisisa zviri nani.
1 Chii chinonzi hupfumi hwemusika?
2 Zvakanakira nekukanganisa kwemusika wehupfumi
3 Market hupfumi muenzaniso
Chii chinonzi hupfumi hwemusika?
Kana isu tichitaura nezve hupfumi hwemusika, kana musika wakasununguka, isu tinoreva kusangano uye seti yezvakasiyana zvinogadzira uye zvekushandisa zvinhu nenzanga. Izvi zvinotenderera pamitemo inozivikanwa yekupa uye kuda. Icho chimiro chakasununguka chinodzivirirwa nevaya vanotenda kuti Hurumende haifanire kupindira, kana kuzviita kusvika padiki padiki pazvinhu zvehupfumi hwenyika ipi neipi.
Kune rimwe divi, kune hupfumi hwakatungamirwa, umo Hurumende inogadzirisa hupfumi kuitira kuzadzikisa mamwe maratidziro eruzhinji, ezvematongerwo enyika uye epfungwa Nekudaro, hapana chibvumirano chekuti panoganhurika papi pakati pekuraira hupfumi nemusika wemusika. Zvakawedzera, Izwi rekuti 'musanganiswa wemusika hupfumi' rakatanga kushandiswa kureva nzvimbo yepakati.
Ndeapi misika yemari
Saizvozvowo, kune makakava ekuti ndezvipi zvinhu zvehupfumi zvinofanirwa kusiiwa kumusika wepachena uye izvo zvinofanirwa kugadziriswa. Chero nzira, hupfumi hwemusika huripo pasirese pasirese icho chiri chikamu che capitalism, hongu, mune dzimwe nzvimbo kusvika pamwero mukuru uye mune dzimwe kusvika padiki.
Mukati memusika hupfumi hurongwa Kune maviri marudzi emakwikwi ekuratidzira:
Makwikwi akakwana: Rudzi urwu rwemakwikwi rwuripo chete mune yakanaka mamiriro, kwechinguvana. Mune ino kesi, yaizotongwa chete uye zvega nemitemo yekugovera uye yekuda. Izvi zvinowanzo kuwana kugadzikana uye kuenzana.
Makwikwi asina kukwana: Kune rimwe divi, makwikwi asina kukwana anoitika kana paine kupindira mune zvehupfumi nezvinhu zvekunze. Izvi zvinogona kuve, semuenzaniso, rubatsiro, dziviriro yenyika, kuzvitonga kuzere, makwikwi asina kukodzera pakati pemakambani nemirau.
Zvakanakira nekukanganisa kwemusika wehupfumi
Sezvakatarisirwa, iyo misika yehupfumi system ine zvayakanakira nekuipira, kufanana nezvose. Tevere tichaenda kunonyora mabhenefiti ayo rudzi urwu rwehupfumi rwunogona kutiunzira:
Dzikisa mitengo yekupedzisira yevatengi nekuda kwenhamba huru yevanokwikwidza.
Zvimwe zvakasiyana maererano nehutano. Nekudaro, mutengi ane dzimwe sarudzo dzaanosarudza kubva paanenge achida kutenga chimwe chinhu.
Kazhinji, vezvemabhizinesi vanowanzo kusimudzira zvirongwa uye vanoisa njodzi. Zvekubata izvi kufamba kwehupfumi kunochengetedzwa.
Zvinoenderana nedzidziso dzevamwe economists, nzanga yaizove nerusununguko rwakawanda mune zvematongerwo enyika nevevanhu kana rusununguko rwehupfumi rwakapihwa.
Kunyangwe aya mapoinzi achirira kwazvo, newewo unofanirwa kuziva kuti hupfumi hwemusika inogona kuve nezvimwe zvakakanganisika Chii chatinofanira kufunga nezvacho:
Maseru akapfuma zvishoma anogona kusarudzika, sezvo avo vasina mari havazokwanise kupinda mumutambo wezvehupfumi.
Nekuti capital yaizopedzisira ichitenderera pakati pemapoka akafanana ehukama, paisazove nekirasi yekufamba. Kureva kuti: Varombo vaizoramba vari varombo asi vapfumi vaizoramba vakapfuma.
Iko kune imwe tsika yekukwikwidza zvisina kunaka uye kuzvitonga. Zvisinei, izvi zviitiko zvinowanzoenderana neHurumende kupindira.
Hupfumi hwepamusika hunogona kukuvadza nharaunda. Nehurombo, ichi chikamu hachiwanzo kutorwa sechinhu chakakosha mune dzakasununguka hupfumi dzidziso.
Market hupfumi muenzaniso
Kuti tinzwisise zvirinani hurongwa hwehupfumi hwemusika, isu tichautsanangura nemuenzaniso. Iko kushanda kweiyi hupfumi sisitimu kunogona kumiririrwa nemutengo musiyano une chekuita nehunyanzvi kana ichangoburwa. Panguva iyo hunyanzvi hwetekinoroji hunowoneka, mitengo yayo inowanzo kuve yakakwira zvekuti ivo chete vepamusoro ndivo vanowana kwazviri. Naizvozvo, chipo chiripo ishoma. Zvisinei, Sezvo kudiwa kweiyo tekinoroji nyowani kuchiwedzera, vakwikwidzi vatsva vanoonekwawo, ichipa dzimwe nzira dzekutenga kune vatengi. Nekuda kweichi chiitiko, mutengo unowedzera kudonha, zvichipa kukwirisa kwekushandisa kwayo.
Mukupedzisa, tinogona kutaura kuti hupfumi hwemusika, senge mamwe masisitimu ehupfumi aripo, ane zvakakosha uye zvakaipira kufunga nezvazvo. Kunyangwe iri sisitimu inozivikanwa pakati pevazhinji vehupfumi, ichiri kure kure neiyo utopia inodiwa nevanhu vazhinji nesimba ravo rese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Hupfumi hwemusika